I-Coxy's Retreat, i-Wagait Beach
U-Chris & Sue Ungumbungazi ovelele
I-Coxy's Retreat iyindlu yamaholide ene-air conditioner enamakamelo angu-2 ene-air conditioner ngokugcwele ezungezwe ukugoqa okujulile kumaveranda ahlinzeka ngama-oodle wesikhala sokuhlala ngaphandle. Itholakala ku-128km ngomgwaqo usuka e-Darwin noma uhambo olusheshayo lwemizuzu engu-15 ngesikebhe ukunqamula e-Darwin Harbour, i-Coxy's Retreat ilungele iholide le-tropical noma ikhefu elisheshayo ukusuka e-Darwin.
I-Coxy's Retreat isethwe endaweni engasemaphandleni futhi inomuzwa wokucashile kuyo. Kunendawo eningi yokupaka isikebhe, indawo yokuba izingane zigibele amabhayisikili azo kanye nehlathi lemvelo lokuhlola. Siyabathanda izilwane ezifuywayo futhi sinikela nge-WiFi yamahhala
I-Wagait Beach iwumphakathi omncane, othulile, obukekayo, oseduze, kodwa izwe elikude ne-Darwin ye-cosmopolitan.
I-Mandorah Jetty iyindawo ethandwayo yabadobi abasemhlabeni noma ungakwazi ukwethula isikebhe sakho usuka kurempu yesikebhe eseduze ukuze udobe itheku nezintuba. Ukudoba olwandle nasemfuleni nakho kuyathandwa.
Ithrekhi yebhayisikili evaliwe ixhuma eMandorah Jetty edolobheni laseWagait Beach.
Amabhishi e-Wagait Beach ahlanzekile futhi awanabantu abaningi, alungele ukuhlola noma ukujabulela izinhlanzi namashibhisi nesiphuzo esiqabulayo ngenkathi uphuza ekushoneni kwelanga.
I-Wagait Beach Supermarket isiza umphakathi. Isitolo esikhulu esinelayisensi sigcina zonke izidingo zakho zeholide ezihlanganisa igrosa, utshwala, ukudla okuthengiswayo, ikhofi, izinto zokudoba, isiyengo, iqhwa, uphethiloli, igesi nehardware. Kuvulwa izinsuku ezingu-7 ngoMsombuluko - ngoMgqibelo 8am-8pm, ngeSonto namaholide omphakathi ngo-8am-3pm. Futhi banezindawo ze-Australia Post kanye ne-ATM.
I-Cox Country Club ivulwa kusukela ngoLwesine - ngeSonto kusihlwa ukuze uthole ukudla okulula kanye neziphuzo ngaphansi kwesihlahla esidala se-Banyan
I-Cloppenburg Park inezindawo ze-BBQ, izindlu zangasese zomphakathi, inkundla yezinhloso eziningi (engase isetshenziselwe ithenisi noma i-basketball), i-oval yezemidlalo enamanethi ebhola kanye nezigxobo zebhola lezinyawo, umzila wokuqina oneziteshi zokuzivocavoca kanye nethrekhi yebhayisikili enokweqa izingane namabhayisikili abo
Umtapo wolwazi wendawo utholakala ezakhiweni zoMkhandlu waseWagait Shire
I-Wagait Beach/Cox Peninsula inothe ngezitshalo nezilwane, umlando we-WWll kanye nehlathi lemvelo elingonakalisiwe.
I-Coxy's Retreat iyazenzela, sishiya izivakashi zijabulela isikhathi sazo ngendlela ezithanda ngayo.
Sihlala endaweni futhi singathintwa njengoba kudingeka